मुख्य समाचार Archives - Page4of 365 -
अभियन्ता दिलिपको हत्यामा संलग्न ४ जना सार्वजनिक
ओमप्रकाश उर्फ दिलीपकुमार महतोको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ४ जनालाई सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार राति ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो । अभियन्ता दिलिपको हत्या गरेको आरोपमा धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ५ बस्ने २७ वर्षीय चुरीयामाई बालुवा प्रहोधन केन्द्रका सञ्चालक विपिनकुमार महतो, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने ३४ वर्षीय टिपर चालक मुनिन्द्र महतो, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर २ बस्ने… पुरा पढौ
आज पृथ्वीजयन्ती तथा एकता दिवस
नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीका अवसरमा पृथ्वीजयन्ती तथा एकता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । विसं १७७९ मा गोरखामा जन्म भएका पृथ्वीनारायणले २२ से र २४ से राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरेका थिए । सात महिनामा तन्त्रविधिबाट उनको जन्म भएको थियो । पृथ्वीनारायणले जीवनमा तीनवटा युद्धमा मात्र हार भोग्नुपरेको पृथ्वीनारायण शाहको योगदानका विषयमा अनुसन्धानरत हरिप्रसाद सोडारीले बताए । विसं १८०० मा नुवाकोटमा पहिलोपटक आक्रमण गर्दा उनी पराजित… पुरा पढौ
पोखरामै शितलहर : सडकहरू पूरै भिजे, जनजीवन कष्टकर
पोखरामा बाक्लो हुूुुस्सु लागेको छ । योसंगै शितलहर पनि परेको छ । नेपालको तराई भेगमा गर्ने शितलहर पोखरामै परेको छ । हुस्सुले बाटोमा सवारी चलाउन र हिंडडुल गर्न समस्या परेको छ भने सडकहरू पूरै भिजेका छन् । साइकल र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरू पनि शितलहरले भिज्ने गरेका छन् । पोखरामा चिसो निकै कडा छ । शनिबार दिउसो १ बजेसम्म हुस्सु लागेको थियो । पोखरामा यस्तो हु्स्सु र शितलरह यसभन्दा अघि कहिल्यै… पुरा पढौ
आज सार्वजनिक बिदा कहाँ-कहाँ हुन्छ ?
पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा यही पुस २७ गते जिल्लाको गोरखा र पालुङटार नगरपालिका, भीमसेन थापा र सिरानचोक गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने भएका छन् । ३ वटै स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले नगरपालिका मातहत र गाउँपालिकाले गाउँपालिका मातहतका कार्यालय बन्द रहने जनाएका छन् । आधुनिक नेपालका राष्ट्रनिर्माता तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई उच्च कदरस्वरुप स्थानीय सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीलाई भव्यता साथ मनाउन सार्वजनिक बिदाको घोषणा… पुरा पढौ
देशको रक्षा र नेपालीको समृद्धिका लागि गहकिलो प्रयास हुनुपर्छ : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको सबै भूभागको रक्षा तथा समग्र नेपालीको समृद्धिका लागि गहकिलो प्रयास हुनुपर्ने बताएका छन् । २९८ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल सदा स्वतन्त्र, शान्त, अविभाज्य र अखण्ड रहनुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रा पुर्खाको पौरखले जोडिएको, जगेर्ना गरिएको हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको हाम्रो यो प्यारो मातृभूमि नेपाल सदा स्वतन्त्र, शान्त, अविभाज्य र… पुरा पढौ
नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पदबाट राजीनामा गर्न भनेको छ । शनिबारप्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामागराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन भने गर्न सकेन । पुरा पढौ
पोखरामा आज विद्युत नआउने, यस्तो छ कारण
पोखरामा आज शनिबार विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा ग्रिड शाखाले सूचना जारी गर्दै शनिबार दुई घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको हो । शनिबार बिहान ११ बजे देखी १ बजेसम्म पोखरा सवस्टेशनबाट विद्युत प्रसारण हुने सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जनाएको छ । पोखरा लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाईन खण्को टावरमा ईन्सूलेटर परिर्वतन गरी ममर्त गर्नका लागि बन्द गर्नु परेको जनाएको छ… पुरा पढौ
तनहूँमा लाग्ने हुस्सु पोखरामा, चिसो निकै कडा
आज शनिबार पोखरामा हुस्सु लागेको छ । बिहान ४ बजेदेखि हुस्सु लाग्न शुरु भएको थियो । अहिले पूरै पोखरा हुस्सुले ढाकेको छ । हुस्सुकै कारण पोखरा अन्धकारमय भएको छ । योसंगै कडा चिसो पनि भएको छ । चिसोले मानिसको चहलपहलमा कमि आएको छ । ‘पहिला पहिला पोखरामा हुस्सु देखिदैनथ्यो । अहिले मौसममा निकै परिवर्तन आएछ’, ज्येष्ठ नागरिक नीलकण्ठ कोइराला भन्छन्, ‘पहिलो विजयपुर खोला पारी मात्र लाग्यो । अहिले त पोखरामै… पुरा पढौ
१५ हजारले अदालत पुर्याउला भन्ने के थाहा ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय यज्ञभूमि धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक कालिचरण पञ्जियारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सवारी दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति दिलाइ दिएबापत रु १५ हजार घुस लिएको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । निज प्रनानी निरीक्षक पञ्जियारविरुद्ध सोही रकम बराबर बिगो माग दाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले नक्कली शैक्षिक योग्यताको… पुरा पढौ
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सवार हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सवार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पाल्पाको तानसेनमा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । काठमाडौंबाट रुपन्देहीका लागि उडेको मन्त्री पोखरेल सवार हेलिकोप्टर मौसममा खराबी आएपछि पाल्पाको तानसेनमा आकस्मिक अवतरण गरिएको हो । पाल्पाका सहायक सीडीओ लक्ष्मण घिमिरले अपराह्न ५ः३० बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तानसेनमा अवतरण भएको जनाए । मौसममा सुधार नभएपछि मन्त्री पोखरेल तानसेनबाट गाडी चढेर रुपन्देही गएको उनले जानकारी दिए ।- फाइल तस्वीर पुरा पढौ